Home Wararka Labo maalin gudahood ayaa askarigii labaad oo qof shacab ah dilay la...
Labo maalin gudahood ayaa askarigii labaad oo qof shacab ah dilay la toogtay
Askari ka tirsanaa Ciidanka Xoogga dalka ayaa dil toogasho ah lagu fuliyay, kaasi oo haray qof shacab ah dil u gaystay, waxaana horay maxkamad loo soo taagay gaacn ku dhiiglaha.
Askariga lagu fuliyay dilka toogashada ah ayaa lagu magacaabi jiray Cabdulqaadir Faarax Dhaqane, waxaana horay uu dil ugu gaystay Marxuum lagu magacaabi jiray Mowliid Baashe Cumar.
Marxuumka dilka loogaystay uu ahaa farsamayaqaan gaadiidka ka shaqeeya, kaasi oo Askarigu uu ku dilay Magaalada Baladxaawo ee Gobolka Gedo, halkaasi oo lagu qisaasay Cabdulqaadir Faarax Dhaqane, oo horay kaga tirsanaa Ciidanka Xoogga.
Halka uu ka dhacay dilka Qisaasta ah ayaa waxaa ku sugnaa Ehelada labada dhinac, kuwaasi oo goob joog ka ahaa, xukunka iyo sidoo kale fulinta qisaasta.
Previous articleTaliyayaasha ciidanka ka amar qaata Farmaajo oo kulan gaara yeeshay! Fartiina u diray Rooble
Puntland oo ciidamo badan ku daadisay Boosaaso.
Madaxweynaha Tanzania oo ka hadlay sida looga dawoobo Coronavirus